तपाइँको वेबसाइटको लागि सही SEO एजेन्सी कसरी छनौट गर्ने बारे Semalt सल्लाहहरू
यसमा कुनै श .्का छैन कि हामी पहिलो SEO एजेन्सी होइनौं जुन तपाईंले सुन्नुभयो वा भेट गर्नुभयो। जे होस्, यदि तपाईं यो पढ्दै हुनुहुन्छ भने, तब सम्भावनाहरू यो हुन् कि तपाईंले आफ्नो मनको कुरा गर्नु पर्दैन कि कुन एजेन्सी तपाईंको व्यवसायको लागि उत्तम हो। यद्यपि Semalt एक एसईओ एजेन्सी आफै हो, हामी तपाईंलाई तपाईंको व्यवसायको लागि उत्तम एसईओ एजेन्सीको लागि के योग्य हुन्छ भन्ने बारे सुझावहरू दिनेछौं।
के तपाइँ एसईओ वेब एजेन्सीको खोजीमा हुनुहुन्छ जुन तपाइँको वेब उद्यम प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ? हामी तपाईंलाई सुझावहरू दिईन्छौं यदि तपाईं सहि एजेन्सी छनौट गर्न चाहनुहुन्छ भने। यसको आफ्नैमा, सही SEO एजेन्सी रोज्नु आफैमा गाह्रो काम हुन सक्छ। जे भए पनि, त्यहाँ धेरै एजेन्सीहरू छन् जुन सबै दावी उत्तम हो भनेर दावी गर्दछन्, तर उनीहरूले उच्च-श्रेणीका सेवाहरू प्रदान गर्दैनन्।
जब तपाइँ तपाइँको व्यवसायको लागि प्रदान गर्नको लागि तपाइँलाई एसईओ एजेन्सीको आवश्यकताको जटिलतालाई विचार गर्नुहुन्छ, यसले तपाइँले विचार गर्नु पर्ने मापदण्डको सम्पूर्ण स्तर थप गर्दछ। यसले प्रक्रियालाई अझ गाह्रो बनाउँछ। कुन एजेन्सी जान्न गाह्रो छ। यदि यो बिक्री पिच हो भने, हामी स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छौं कि Semalt साना र मध्यम स्तर वेबसाइटहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो एसईओ एजेन्सी हो। जहाँसम्म, हामी यहाँ छौं भनेर त्यस्तो छैन। यस लेखमा, हामी तपाईंलाई कसरी थाहा दिने कि कसरी एजेन्सीले ट्र्याक वा स्पाम बिना व्यावसायिक रूपमा तपाईंको वेबसाइट अनुकूल गर्न सक्दछ।
हाम्रो बर्षको अनुभवमा, हामीले केहि ग्राहकहरूको साथ एसइओ एजेन्सी निर्माण गरेर सुरु गरेका थियौं, र आज हामीसँग 500०० भन्दा बढी ग्राहकहरू छन्। यस समयमा, हामीले अन्य एसईओ एजेन्सीहरू भेट्यौं, र हामीसँग उत्कृष्ट एसईओ एजेन्सी बनाउने बारे उत्कृष्ट विचार छ।
तपाईंलाई के जान्नु आवश्यक छ
कुन एसईओ ईन्टरप्राइजको प्रयोग गर्न छनौटमा एउटा ठूलो कारक तपाईको एसईओ एजेन्सीले प्रदर्शन गर्ने कार्यको बारेमा केमा निर्भर गर्दछ। सहि एसईओ एजेन्सी छनौट गर्दा तपाईले उनीहरूलाई के गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने बारे स्पष्ट ज्ञान हुनुपर्दछ।
यदि तपाईंले आरएफपी प्रक्रियाको दौरान अपेक्षाहरू सेट अप गर्नुभयो तपाईं सक्षम एसईओ एजेन्सीलाई खराबबाट भिन्न पार्न मद्दत गर्दैन। जे होस्, यसले तपाइँलाई लामो दौडमा सफलताको लागि सेट अप गर्दछ। तपाईंको एसईओ एजेन्सीको साथ ड्राफ्ट र एसईओको लागि उपकरणहरू भएको तपाईंलाई आफ्नो आवश्यकताहरू व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ र एजेन्सीले अगाडि बढ्ने आशा राख्दछ।
एक व्यापार मामला भएको पनी प्रमुख सरोकारवालाहरु संग तपाइँको अपेक्षाहरू संचार र खरीद मा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सही उद्यम कहाँ फेला पार्ने
एजेन्सीहरूले सँधै दावी गर्छन कि तिनीहरू केहि गर्न सक्छन्, तर अनुभवबाट, यो सधैं मामला हुँदैन। यदि तपाईंले आफ्नो एजेन्सी फेला पार्नुभएको छैन भने, गुगलमा कुन एजेन्सीहरू सब भन्दा राम्रो हो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ दिमागमा राख्नुपर्ने धेरै कारकहरू छन्। हामीले पत्ता लगाएका सब भन्दा प्रेसि issues मुद्दाहरू मध्ये एक मूल्यको कारक हो। धेरै सिलिकॉन उपत्यकामा आधारित एसईओ एजेन्सीहरूले तपाईंको बजेट माथि शुल्कको लागि अनुरोध गर्न सक्दछन्। भनेपछि तिमी के गरछौ त?
उत्तम एसईओ एजेन्सीहरूबारे जान्नको लागि, तपाईंले उद्यम स्तरमा एसईओ पेशेवरहरूसँग कुरा गर्नुपर्नेछ र उनीहरू को को लागी प्रयोग गर्छन् वा को लागी पत्ता लगाउनु पर्छ। यदि तपाईं आफ्नो माछा मार्ने जाल चौडा फैलाउने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले प्रस्तावको लागि अनुरोध गर्नु पर्छ (RFP)। तपाइँको वेबसाइटहरूलाई के चाहिन्छ र तपाइँ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ भनेर पनि तपाइँ स्पष्ट हुनुपर्दछ; एजेन्सीहरू समीक्षा गर्दा तपाईलाई कुनै समस्या हुने छैन।
एजेन्सीहरूसँग तपाइँका अपेक्षाहरूको बारेमा छलफल गर्नुहोस् र उनीहरूले तपाइँका अनुरोधहरू कति राम्रोसँग व्यवहार गर्छन् हेर्नुहोस्। यदि तपाईं प्रभावित हुनुहुन्छ भने, सम्भावना यो छ कि त्यसले तपाईंको वेबसाइटको अन्तिम डेलिभरीमा तपाईंलाई प्रभाव पार्छ।
तपाईंले आफ्नो विकल्पहरू खुला राख्न र सावधानीपूर्वक सेवा एजेन्सीहरूको सेवा गर्नु पर्छ जुन तपाईंको मापदण्डहरू पूरा गर्दैन। तपाइँलाई समयको आवश्यक पर्दछ र यस प्रक्रियाको क्रममा धेरै बैठकहरू सेटअप गर्नुपर्नेछ जुन तपाइँलाई प्रक्रियाको अन्त्यमा उत्तम पाउन सक्षम पार्दछ।
के एक एसईओ एजेंसी अलग बनाउँछ?
एसईओ एजेन्सीहरूको लागि जानु बुद्धिमानी हुन्छ जुन अनुभवी छन् तर ती साना र स्पष्ट गल्तीहरूको नोट लिन पर्याप्त लगनशील छन्। त्यहाँ धेरै एसइओ एजेन्सीहरू छन् जसले साना र "स्पष्ट" गल्तीहरूलाई हेर्दैनन् जुन वेबसाइटहरूको प्रदर्शनमा प्रभाव पार्न सक्छ।
तपाईंले निम्न कारकहरू विचार गर्नुपर्छ:
बुझ्नुहोस् कि त्यहाँ एक साइटमा केहि सुविधाहरूको पछाडि व्यापार कारण हुन सक्छ।
प्रभाव बनामसँग अनुसरण गर्नुहोस्। भनिएको गल्तीहरू ठीक गर्न कति प्रयास चाहिन्छ।
कुनै पनि पुशब्याकको साथ फिडब्याकको लागि खुला रहनुहोस् जुन तपाईंको एसईओ एजेन्सीको समीक्षाको बखत हुन सक्छ।
तपाइँ एक अनुभवी SEO एजेन्सी जानु पर्छ। त्यो किनभने एजेन्सीहरू जसले जटिल परियोजनाहरूसँग काम नगरेको बुझ्दछन कि:
यो सजिलो नहुन सक्छ।
व्यवसायले यसलाई समर्थन नगर्न सक्छ।
त्यहाँ कानूनी कारकहरुमा विचार गर्न सकिन्छ।
फिक्स मापन योग्य नहुन सक्छ।
SEO विशेषज्ञहरूले यो पनि बुझ्नेछन् कि ठूलो कम्पनीको लागि सment्लग्नताको स्तर साना ग्राहकहरूको लागि आवश्यक भन्दा बढी हुन सक्छ। पेशेवरको रूपमा, एसईओ एजेन्सी सक्रिय हुनुपर्दछ किनभने कम्पनीमा एसईओ टोली सबै अफिसमा आधारित कामले विचलित गरेको छ।
यो आवश्यक छ कि एजेन्सी नियमित चेक-इनहरू मर्मत गर्दछ र उत्तम सेवाहरूको लागि सञ्चार लाइनहरू खुला राख्छ।
सहि एजेन्सी पाउँदा, तपाइँ एक एसईओ प्रबन्धक को लागी जानु पर्छ जुन ":
अफिसमा उनीहरूको डेस्क, कम्पनी ईमेल, लगइन उपकरणहरू, र रिपोर्टिंगमा ठेकेदार स्थितिको साथमा बस्दछन्।
संगठनमा ईन्जिनियरिंग र ठाडो बीच नियमित बैठकहरूमा भाग लिन्छ।
संचारले तपाईं र तपाईंको SEO एजेन्सीको बीचमा कुनै पनि सफल साझेदारीको आधार बनाउँछ। संचारले कार्य रणनीतिहरू, फाउन्डेसनल फिक्सहरू, र सहज अनुगमनको लागि कोठा सिर्जना गर्दछ, यो सुनिश्चित गरेर कि काम पूर्ण रूपमा हुन्छ।
तपाइँको एसईओ एजेंसी को प्रबंधन
अब तपाईंले सहि एजेन्सी फेला पार्नुभयो, कसरी तपाईं कसरी पक्का गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरू तपाईंको उद्देश्यको साथ ट्र्याकमा छन्? तपाईंको एसईओ एजेन्सीको सर्तहरू कायम राख्नको लागि महत्वपूर्ण कुराकानी हो। तपाईंले उनीहरूलाई उपकरणहरू र पहुँच प्रदान गर्नुपर्नेछ उनीहरूलाई तपाईंले नियुक्त गर्नुभएको कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न आवश्यक छ। यो सम्भव छ कि सबै भन्दा राम्रो एसईओ एजेन्सी हप्ता वा महिनामा तपाइँको साइटमा दुबै पक्षको निराशाको परिणामस्वरूप काम गर्न गएको छैन, कसैको गल्ती नभएको हुन सक्छ।
थोरै संचार र थोरै समर्थनको साथ, एसईओ एजेन्सीहरू तपाईंको एसईओ इच्छाहरू पूरा गर्न सफल हुन सक्दैन, र यसले दुबै पक्षहरूलाई असन्तुष्ट छोड्छ।
¢ € ¢ तपाईंले अपेक्षाहरू र रोडम्याप सेट अप गर्नुपर्छ जुन एसईओ एजेन्सीले अनुसरण गर्न सक्दछ। जब मुद्दाहरू खडा हुन्छन्, यो तपाईंलाई मद्दतको लागि सहयोग पुर्‍याउन र तपाईंलाई चाहेको परिणामहरू अनुसरण गर्न सहयोगी हुनेछ।
¢ € ¢ एकै पटकमा जाँच गर्न प्रयास गर्नुहोस्; हामी हप्तामा एक पटक भन्नुहोस्, र के भयो र के छोडियो स्पष्ट सूची अनुरोध गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग कुनै सिफारिसहरू छन् भने, उत्तम डेलिभरी गर्न बोल्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
¢ € ¢ मुख्य सरोकारवालाहरु संग मासिक चेक इन प्रत्येक को उद्देश्य मा केन्द्रित राख्न छ।
SEO सक्षमता कार्यान्वयनको कुञ्जी हो
SEO पेशेवरको रूपमा, धेरै पटक, हामी आफैंलाई गेटकीपरहरू वा चौकीदारहरूको रूपमा अभिनय पाउँछौं। गेटकीपरहरूको रूपमा हाम्रो कर्तव्य सबै SEO र सबै भन्दा राम्रो एसईओ अभ्यासहरू अनुसरण गरेको सुनिश्चित गर्न टेक्निकल निर्णय QAing गर्दैछ।
जेनिटरहरूको रूपमा, हामी पूर्वनिर्धारित रूपमा अन्य टोलीहरूले गर्ने निर्णयहरूलाई कम गर्दछ वा कम गर्छौं जसले एसईओ प्रक्रियालाई स्तब्ध पार्न वा बिगार्न सक्छ।
एसईओ सक्षमता एक निरन्तर सीखने प्रक्रिया हो र ज्ञान, संसाधनहरू, र उपकरणहरू हाम्रो एजेन्सी र ग्राहकको कम्पनीहरु बीच साझेदारी। यो प्रक्रिया सिर्जना गर्दा, हामी तपाइँको स्थानीय एसईओ टीम को एक SEO मानसिकता को विकास गर्न मद्दत गर्दछ।
धेरै प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताहरू र अनुरोधहरूको साथ, तपाईंको SEO प्रयासहरूलाई प्राथमिकता दिन सही समय भेट्टाउन गाह्रो हुन सक्छ। जे होस्, हामी निश्चय छौं कि तपाईको वेबसाइट छन, र हामी यहाँ छौं तपाईलाई प्रक्रिया मार्फत मद्दत गर्न।
Semalt मा, हामी तपाईंलाई किन राम्रो छौं भनेर दावी गर्नुको सट्टा हामी किन उत्कृष्ट छौं भनेर देखाउन चाहन्छौं। हाम्रो जस्तो एजेन्सीको साथ, तपाईंको वेबसाइट SERP मा मात्र श्रेणी दिदैन, तर यसले तपाईंको सबै भन्दा राम्रो अपेक्षाहरू पूरा गर्दछ। एक एजेन्सी को रूप मा, हाम्रो प्रभावशाली सेवाहरु यसको प्रकृति वा आकार को पर्वा बिना तपाइँको व्यवसाय को आवश्यकताहरु को लागी डिजाइन गरीएको छ।
Semalt यी सबै सगाई उपकरणहरू प्रयोग गर्दछ महान सामग्री सिर्जना गर्न मात्र होइन तर तपाईंको आगन्तुकहरूले उनीहरू तपाईंको वेबसाइटमा देखेका देखेर खुशी छन् भनेर निश्चित गर्न। अन्तमा, तपाईंसँग खुसी ग्राहकहरू छन् तपाईंको व्यवसायको संरक्षण गर्न इच्छुक।
लि building्क निर्माण अलि गाह्रो हुन सक्छ किनकि नयाँ वेबसाइटको रूपमा, कसैले तपाईंलाई राम्रोसँग चिन्दैन। यो किन यति महत्त्वपूर्ण छ तपाईंले Semalt ले तपाईंलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ। हाम्रो शानदार ट्र्याक रेकर्डको साथ, र केवल उत्तम प्रदान गर्ने हाम्रो क्षमताको साथ, अन्य वेबसाइटहरूले तपाईंलाई विश्वासनीयको रूपमा पहिचान गर्दछ।
आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् â ¦